WordPress: प्रकोप पुन: प्राप्ति | Martech Zone
बिहीबार, अप्रिल 5, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
अन्तिम केहि दिन म मेरो राम्रा साथी प्याट कोयलको ब्लग ब्याकअप प्राप्त गर्न जोशका साथ काम गर्दैछु। (मेरो बिदा अझै रमाईलो हुँदै जान्छ - आज यो थोरै हिउँ परेको छ ... अप्रिलमा! ग्लोबल वार्मिंगलाई जे भए पनि?)
म के भएको हो साझेदारी गर्न चाहन्छु र त्यसपछि मैले रोकथाम कार्यहरू कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल गरें र कसरी यसलाई सुधार गरियो।
यहाँ के भयो?
A DNS सर्भर फ्रिजमा गयो। A DNS सर्भरले आगमन ट्राफिकलाई डोमेन नाममा अनुवाद गर्दछ र उपयुक्त सर्भरमा पुनःनिर्देशित गर्दछ। यस घट्नासँग, यसले संचारको २ साधनहरू बिच्छेद गर्दछ - साइटको लागि डोमेन नाम र डाटाबेसमा साइट (उसको डाटाबेस हाल साझा वातावरणमा छ)।
मैले आफ्नो ब्लगलाई अर्को सर्भरमा द्रुत गतिमा सार्दै चीजहरू जटिल बनाएँ, DNS मुद्दा छ भनेर बुझेर। यसले जटिलताको अर्को स्तर थप गर्दछ। WordPress मा पासवर्डहरू (र अधिक अन्य डाटाबेस अनुप्रयोगहरू) सर्भर द्वारा अद्वितीय रूपमा ईन्क्रिप्ट गरिएको छ जुन तिनीहरूमा छन्। यदि तपाईंले साइटलाई अर्को सर्भरमा सार्नुभयो भने, तपाईंले भर्खरै पासवर्डलाई डिक्रिप्ट गर्नको लागि आफ्नो क्षमता अक्षम गर्नुभयो। धन्यबाद, वर्डप्रेस (अर्को महान सुविधा) सँग पासवर्ड रिकभरी प्रणाली छ जहाँ तपाईं ईमेलमा लिंक मार्फत आफ्नो पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ मैले गरेको तत्काल कार्यहरू छन्:
यो कहिले आउनु भन्दा पहिले, मैले भन्नै पर्छ कि म एक शानदार वेब होस्टिंग कम्पनीको साथ छु जसले व्यापक ब्याकअप गर्दछ। मसँग कहिले पनि समस्या आएको छैन कि उनीहरू ब्याकअप मार्फत सही गर्न सक्षम भएनन्। मैले उनीहरूका ब्लगहरू र साइटहरूमा अन्य व्यक्तिहरूका दुःस्वप्नहरू पूर्णतया हराएको सुनेको छु। म कल्पना गर्न सक्दिन कि यो के हो त्यसरी नै जान्छ। (मेरो आरएसएस फिडको सदस्यता लिनुहोस् र तपाइँ मेरो होस्टको साथ नि: शुल्क वर्षको लागि कुपन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ)।
म द्वारा वेब सर्भरमा लगईन गर्न सक्षम भयो एफटीपी र दुबै साइट पुन: प्राप्त गर्नुहोस् र डाटाबेस। मेरो होस्टिंग प्याकेजको अर्को विशेषता यो हो कि म सम्पूर्ण पहुँच गर्न सक्दछु VDS वास्तविक वेबसाइट भन्दा बाहिर। MySQL डाटाबेस एक फाईल निर्देशिका (/ var / lib / mysql /) मा भण्डारण गर्दछ। मैले डाटाबेस डाउनलोड गर्न सक्षम भयो केवल डाइरेक्टरी स्थानीय प्रतिलिपि गरेर। राम्रो ब्याकअपको बारेमा कुरा गर्नुहोस्! आयात छैन, निर्यात छैन, अधिकतम फाईल आकारहरू सम्झौताको लागि ... केवल FTP।
अब जब मसँग साइट र डाटाबेस स्थानीय छ, मैले लामो आरामबाट सास लिएँ। यदि म यहाँ बस रोकिएँ र धैर्य गरें भने, DNS मुद्दा आफैंमा काम गर्ने थियो र प्याट चाँडै नै फिर्ता हुन्थ्यो। मैले प्रमाणीकरण गरें कि डोमेन नाम अझै पनी मेरो होस्ट उपयोग गरीरहेको उपयुक्त सर्भरमा इशारा गर्दै थियो Whois.net। यदि तपाईं त्यहाँ आफ्नो डोमेन जाँच गर्नुभयो भने, नाम सर्भरहरू रिपोर्टको तल तल हुन्छन्।
यसले मलाई विश्वास गर्न लगायो कि सम्भवत: साइट ह्याक हुन सक्छ। नाम सर्भर सहि थियो तर आउँदै गरेको पृष्ठ केही डरलाग्दो पृष्ठ थियो जुन स्पाम जस्तो देखिन्थ्यो। मैले प्रत्यक्ष हेडरहरू एड-अन फायरफक्समा यो निश्चित गर्न म वास्तवमा पुन: निर्देशित भइरहेको थिएन - धेरै व्यक्तिहरूले देख्ने विशिष्ट ह्याक। साइट पुन: निर्देशित भइरहेको थिएन। मैले केहि थप समस्या निवारण गर्न सक्दछु; जे होस्, म मेरो होस्टको साथ समर्थन टिकट प्रविष्ट गरें ताकि उनीहरूका विशेषज्ञहरूले अनुसन्धान सुरु गर्न सक्दछन्।
तपाइँको साइटलाई फरक खाता वा होस्टमा पुनर्स्थापित गर्दै:
मैले प्याटलाई भर्खरको वर्डप्रेस २.१, PHP, र MySQL को नवीनतम संस्करणमा अपडेट गरेको थिएन, त्यसैले मैले निर्णय गरे कि त्यहाँ उपस्थित भन्दा उत्तम समय छैन! मैले उसको पुरानो खाता मेटाएँ र नयाँ खाता सुरू गर्‍यो। मैले उसको ईमेल उपनाम पुन: प्रविष्ट गरे र डाटाबेस लोड गरे, WordPress 2.1 र प्याट को सामग्री:
डब्ल्यूपी-सामग्री अपलोड निर्देशिका - यो जहाँ तपाइँका अपलोड गरिएका छविहरू सबै बस्छन्।
डब्ल्यूपी-सामग्री प्लगइन डाइरेक्टरी - तपाइँका सबै प्लगइनहरू (यो पछिल्लो गर्नुहोस् किनकि तपाइँसँग संस्करण समस्याहरू हुनसक्दछन्।
wp - सामग्री विषयवस्तु निर्देशिका - तपाईंको विषयवस्तु।
म आशा गर्दछु कि वर्डप्रेसको भावी रिलीजमा यी directories डाइरेक्टरीहरू सब डाइरेक्टरीको सट्टा मूल निर्देशिका हुन्छन्। यो अपग्रेडिंग धेरै सजिलो बनाउन हुनेछ! यस समयसम्म, मेरो होस्टले DNS मुद्दा फेला पारेको थियो र साइटलाई सही रूपमा पुनः निर्देशित गरेको थियो। Whew! अब प्याटको पृष्ठ एक WordPress अपग्रेड सन्देशको साथ आउँदै थियो। मैले डाटाबेस अपग्रेड गर्न क्लिक गरें र ऊ फिर्ता आयो… लगभग।
मैले भनेको ईन्क्रिप्शन मुद्दा याद छ? हो, प्याट यसको कारणले लगइन गर्न सक्दैन। उसको पासवर्डले डाटाबेसमा राम्रोसँग डिक्रिप्ट गरेन त्यसैले मसँग अझै एउटा सुधार गर्नुपर्‍यो। मैले डेटाबेसमा शारीरिक रूपमा लगइन गरें र प्याटको उत्तर ईमेल ठेगाना प्रयोगकर्ता तालिकामा मेरो ईमेल ठेगानामा परिवर्तन गरें। त्यसपछि मैले पासवर्ड रीसेट गर्नको लागि एउटा लिंक ईमेल गर्न "मेरो पासवर्ड हरायो" सुविधा प्रयोग गर्‍यो। पासवर्ड रिसेट गरेपछि, मैले लग इन गरें र प्याटको ईमेल ठेगाना परिवर्तन भयो।
र अब प्याट ब्याक अप छ! हिन्डसाइट २०/२० हो ... यदि मैले मेरो होस्टमा बस प्रतीक्षा गरेको भए, यो समस्या सुधार्ने थियो। म वास्तवमै मुद्दा जटिल छ। यद्यपि प्याट अब अपग्रेड भयो र सबै चीजको उत्तम संस्करणहरू चलाउँदैछ। मलाई माफ गर्नुहोस्, ऊ यति लामो समय सम्म तल थियो। यसले डाउनटाइमबाट पछाडि उत्र्न धेरै समय लिदैन, तर यो गन्ध असुविधा हो! माफ गर्नुहोस्, प्याट!
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं एक होस्टमा हुनुहुन्छ जुनसँग राम्रो ब्याकअप छ।
तपाईंको साइट र डाटाबेसको ब्याकअप गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा भण्डार गर्नुहोस्।
यदि तपाईं एक राम्रो होस्टको साथ हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूमा भर पर्नुहोस् पत्ता लगाउनुहोस् र मुद्दा सुधार गर्न।
यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने, नयाँ होस्ट वा खातामा जानुहोस् र साइट, डाटाबेस, र तपाईंको पासवर्ड पुन: प्राप्ति गर्ने तरिका बुझ्नुहोस्।
आजकल छिटो इन्टर्नेट जडानको लागि मांग धेरै गुणा बढेको छ। पक्कै पनि, इन्टरनेट को यो गतिशील संसारमा, उपग्रह फोन यसको मूल्यवान साबित भएको छ। जब यो वायरलेस इन्टरनेटको लागि आउँदछ, मानिसहरू अझै जोखिममा छन् र सोध्छन् कसरी वायरलेस इन्टरनेट धेरै तिनीहरूको लागि मूल्यवान। विशेष गरी वेबमास्टरहरूको महत्त्व वायरलेस डीएसएल कुनै प्रश्न छैन। अधिकतर यी वेबमास्टरहरू रुचाउँछन् वेब डिजाइन स्टूडियो डिजाइनिंगको लागि र त्यसपछि यसलाई अपलोड गर्न यो उच्च गति जडानको आवश्यक पर्दछ। अर्को चरणको रूपमा यस द्रुत जडानको प्रक्रियामा पनि आवश्यक छ खोज इञ्जिन मार्केटिंग। एक व्यक्ति भएको माइक्रोसफ्ट प्रमाणपत्र यी जडानहरूको नेटवर्कि inमा सबै समस्याहरू सजिलैसँग ह्यान्डल गर्न सक्दछन्।
टैग: WordPress प्रकोप पुन: प्राप्ति
सीमा ०० मा प्रत्यक्ष: सीमाहरू बनाम अमेजन ईमेल मार्केटिंग